WARKII LA SUGAYEY: Jurgen Klopp Oo Caddeeyey Haddii
By axadle Last updated Jun 30, 2020
Tababare Jurgen Klopp ayaa ka hadlay arrintii laga sugayay ee ahayd haddii uu kooxdiisa firfircoonaysiin ku samayn doono oo uu suuqa ka doonan doono ciyaartooyo cusub oo uu kusii xoojiyo, kaddib markii ay fasal ciyaareedkan dhibco rikoodh ah ku qaadeen horyaalka Premier League oo ay muddo soddon sannadood ah raaidnayeen.
Klopp waxa uu sheegay in kooxdiisu aanay suuqa gelin doonin malaayiin lacag ah oo ay ciyaartooyo kusoo iibsato, waxaanu tilmaamay in xanuunka Korona uu dhaawac gaadhsiiyey dhaqaalaha kooxdiisa, taas oo kaliya aanay ahayn inay kubadda cagta uun ku hawlan tahay laakiin ay bixinayaan biilal.
Waxa kale oo uu xusay in ciyaartoydii bixi lahaa iyo kuwii kooxda iman lahaaba uu saameeyey xanuunka, ayna isku dayi doonaan inay kooxda dhexdeeda ka helaan ciyaartooyo u xalliya mushkiladaha, taas oo loo fahmay in kooxda da’yarta uu kasoo dallacsiin doono ciyaartooyo yaryar.
Jurgen Klopp oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi: “Si dhab ah qofna uma garan karo sida uu biilku u badnaan doono. Waxaan ku rajo weynahay in si degdeg ah ay u dhamaan doonto, laakiin ma bilaabi doono inaanu damaanad qaadno in wax walba ay hagaagi doonaan.
“Ma kharash garayn doono malaayiin iyo malaayiin iyo malaayiin, sababtoo ah, waxaanu doonaynaa ama ka fikiraynaa inaanu si wanaagsan wax u qabanno. Waligayno maanaan doonin taas. Xaqiiqaduna waxay tahay in caabuqu uu sameeyay labad dhinacba, imaatinkii iyo bixitaankiiba, lamana filayo inuu noqon doono xagaagii ugu mashquulka badnaa adduunka.”
Tababare Klopp waxa uu tilmaamay in kooxdiisu aanay u qaybsanayn safka koowaad iyo ciyaartooyo beddel ah, waxaanu caddeeyey in suuqa kala iibsiga ay kooxdooda gudaheeda ka xallin doonaan.
“Waxaanu haysanaa ciyaartooyo badan. Ma haysano 11 ciyaartoy oo safka hore ah, laakiin waxaan odhanayaa waxaanu haysanaa 16 ama 17 ciyaartoy oo dhamaantood isku heer u ciyaari karaya. Laakiin waa inaanu isticmaalno kuwan, boqolkiiba 100. Waxa aanu doonaynaa waa inaanu abuurno kala wareeg ciyaartoyda oo gudaha kooxda ha.”
Intaas kaddib Klopp waxa uu jamaahiirta Liverpool u ballan-qaaday in xiddigaha waaweyn ee kooxda aanu midkoodna ka tegi doonin, sida Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Virgil van Dijk, waxaanu yidhi: “Waxaanu aad ugu kalsoonahay inaanu ilaashanu ilaashan doono kooxdan si wada jir ah.”
axadle 3167 posts